tsara indrindra ADN fitsapana ho an'ny Rosiana - Mahita ny Very rosiana okrainiana Fianakaviana - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Maka hevitra amin'ny mpisolovava online
* Ny anaranao
* Ny finday
* Ny e-mail
tsara indrindra ADN fitsapana ho an'ny Rosiana - Mahita ny Very rosiana okrainiana Fianakaviana
Ny vehivavy ihany no afaka mahazo ny reny haplogroups
Ankehitriny fa efa manazava ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana fitiliana amin'ny telo lehibe ny ADN tetiaran orinasa, manantena aho ny mbola tsy matahotra na iza na iza hiala fitiliana ny ADNNy rehetra dia mitovy ny tombontsoa sy ny fianakaviana ny toe-javatra izay hisy fiantraikany eo ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fisafidianana ny tsara ny orinasa. Ny fitiliana ADN orinasa tsy manana ny fahafahana ny faharatsiana na iza na iza ny foko rosiana na ny okrainiana. Ny fahaizana ny ADN fitsapana izao ihany no rava ny Eoropa atsinanana.
Fitsapana amin'ny AncestryDNA ny tsara indrindra ho an'ny foko ny faharatsiana.
Family Tree ADN ihany koa ny manana ny matanjaka foko ny faharatsiana sy ny Fianakaviana Finder test. Fitsapana amin'ny andme. Izany dia manome reny sy ny avy amin'ny rainy haplogroups, miaraka amin'ny ADN-ny havany ny lalao, noho ny autosomal test. Ny manokana bebe kokoa haplogroups afaka ho azo amin'ny alalan'ny Family Tree ADN sy ny E-ADN sy ny MtDNA fitsapana, fa ireo fitsapana dia lafo kokoa. Ny olona dia afaka mahazo ny avy amin'ny rainy sy ny reny haplogroups. Fitsapana amin'ny Fianakaviana Hazo ADN, ny hany orinasa lehibe telo izay mandefa ny ADN fitsapana Rosia, ary Ukraine. Ny rosiana havana tonga ny tontolo miteny anglisy ny ETAZONIA, Kanada, Angletera ary Australia tamin'ny faramparan'ny faha, ary tany am-piandohan'ny taonjato faha. Ny fianakaviana afa-nandositra ny firaisana sovietika tamin'ny taona sy. Tsy fantatro na ny havany hafa nitoetra tany URSS na nifindra monina. Fitsapana amin'ny Fianakaviana Hazo ADN mba hahita mifanaraka monina any Rosia, Okraina, ary ireo hafa teo aloha ny faritra rosiana Fanjakana. Raha ny lalao dia tsy ny zavatra ianao manantena, dia fitsapana amin'ny AncestryDNA. Efa bunch ny lehilahy havana vonona ny handray ny Y-test ADN (ny avy amin'ny rainy-dalana fitiliana) ary te-hahita ny lalao mifandray mivantana ny avy amin'ny rainy-tariby. Fitsapana amin'ny Fianakaviana Hazo ADN. Izany dia hanome anao ny tena antsipirihany sy ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny ny te hahafanta-javatra. Raha ny marina aho nanao izany noho ny raiko ny voalohany mpiray tam-po, izay miampanga lainga ny tsaho mba ho tsy misy ifandraisany am-polo taona. Fitsapana amin'ny andme voalohany.
Izany dia manana ny tsara indrindra ny sehatra fiadian-kevitra mba hanampiana ny adoptees mahatakatra ny fifandraisana amin'ny ireo afokasoka, ary hitady fanampiana fanampiny.
Raha izay tsy miasa tsara, avy eo dia miezaka ny Fianakaviana Hazo ADN. Aho, dia nandray avy amin'i Okraina sy manontany tena ny, na ny iray tam-po, izay noraisin'ny fianakaviana hafa, efa nizaha toetra. Izaho mpanao voalohany amin'ny fahalalana ny ADN tetiaran fitiliana ary mila ny fitaovana tsara indrindra ho nahafantatra ny fifandraisana amin'ny ny mifanaraka. Fitsapana amin'ny Fianakaviana Hazo ADN, izay afaka mianatra ny mahazatra ny lalao tsirairay ny olona izay tsy dia mifanaraka sy afaka mampiasa ny krômôzôma navigateur mba hahita izay mifanaraka manana ny mitovy razambe. Maka aho vintana iray amin'ny fitiliana ny ADN. Aho mitady ny orinasa izay manome ny tena vaovao momba ny lalao, ary manana mpanjifa izay no tena te-hahalala ny fifandraisana mifanaraka. Fitsapana amin'ny Fianakaviana Hazo ADN.
Aho mitady ny taranak ireo havany
Ny ampahany lehibe andme mpanjifa liana amin'ny fahasalamana tahirin-kevitra avy amin'ny ADN fitsapana. Be dia be ny olona ao amin'ny Razambeny ADN no tsy mahalala loatra momba ny razambeny any Rosia, ary Ukraine. Izaho ihany no afaka hizaka ny fitsapana iray. Ahoana no ahafahako mahazo mifanaraka avy amin'ny olona izay nizaha toetra rehetra avy amin'ny orinasa telo? Download ny ADN rakitra sy ny famindrana ny rakitra ny lova sy ny Tranonkala maimaim-poana. Olona efa voasedra tamin'ny Razambeny ADN sy ny andme, fotoana fohy indray, afaka hamindra ny ADN rakitra ho maimaim-poana ny Fianakaviana Hazo ADN. Izaho miandry ny namely ny jackpot amin'ny ADN tetiaran fitiliana. Izaho envious ny tantara ny fahombiazana lehibe aho dia namaky tao amin'ny sehatra fiadian-kevitra. Ny vintana mitovy fahombiazana toa ambany satria na ny ray aman-dreniny, tonga tao ETAZONIA tamin'ny fiandohan'ny taona avy amin'ny firaisana sovietika. Ny reniny naka ny Fianakaviana iray izay nahita fitsapana avy Familiarized ny volana septambra sy ny vokatra niverina amin'ny faran'ny volana oktobra.
Hatreto, ny lalao mbola tsy nomena ahy na inona na inona breakthroughs.
Ny reniko dia nanangona mifanaraka sy ireo dia mahazatra ny lalao miaraka amiko.
Mandritra izany fotoana izany, izaho ihany no manana mifanaraka amin'ny telo taona avy amin'ny iray ihany ny fitsapana. Tsy ela taorian'ny nanaovako ny Fianakaviana Finder fitsapana, izaho koa dia ny MtDNA fitsapana, izay mitady mifanaraka amin'ny mandalo ny reniko, ny reniny, ny reniny, sns. Efa dimy lalao izay tokony ho mifandray amiko ao anatin'ny dimy taranaka. Hatreto, efa nanana vintana ireo lalao noho ny zavatra fatany tao amin'izao fotoana izao andro Polonina. Aho manome izany fitiliana ny ADN roa kokoa ny miezaka. Ny reniny, ny rahalahy dia nanaiky ny haka ny Fianakaviana iray izay nahita fitsapana avy FamilyTreeDNA.
Izaho no te hahalala raha mba misy lehilahy havana hitondra ahy ny sasany vintana.
Tsy ela taorian'ny voalohany mifanaraka tonga aza, dia buy ny Y-ADN toerana fitsapana mba hahitana na ny lalao dia mety ho hita ho an'ny raibeny avy amin'ny rainy ny fianakaviana. Y-ADN fitsapana fikarohana ho an'ny mifanaraka amin'ny mandalo ray, ny ray, ny ray, sns. Ihany ny lahy, dia afaka handray izany ny test. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia afaka maka ny MtDNA test. Izany ihany koa dia mety ho mahaliana ny mahita avy amin'ny E-ADN hizaha toetra ny toerana ny raibeko ny fianakaviany avy Kursk, Rosia, nivoaka avy an'arivony taona lasa izay, manome ahy izay tsipika ny haplogroup. Koa, izaho efa naka ny iray hafa ny ADN-ny test. Izany fotoana izany amin'ny alalan'ny andme. Efa nandre ny fitarainana fa maro loatra andme mpanjifa dia zava-dehibe kokoa momba ny fitsaboana genetic data. Ny FDA nisintona ny plug ao amin'ny andme ho an'ny fanafahana ny mpanjifa' ny vintana ny fananana isan-karazany fepetra ara-pahasalamana sy mamaly ny sasany zava-mahadomelina ka andme dia mampiasa ny lehibe-barotra fanentanana mba hisarihana bebe kokoa ny mpanjifa liana amin'ny tetiarana.
andme mpanjifa mitaraina ihany koa ny orinasa ny forum izay mifanitsy tsy mizara ny genetic data.
Aho mahita ao ny andro vitsivitsy raha izaho no manana olana toy izany koa.
Ny telo lehibe ny orinasa noho ny ADN tetiaran fitiliana dia FamilyTree ADN, AncestryDNA sy andme. Manantena aho fa mba manana hevitra tsara kokoa momba izay ny orinasa dia ny tsara indrindra rehefa mahita ny voalohany hametraka ny andme mifanaraka.
andme dia milaza fa"ny lehibe indrindra ny ADN-ny razambe ny asa fanompoana ao amin'ny tontolo izao"koa aho ka hahita na afaka hanome ahy ny tsara indrindra mifanaraka.
Mpamily ny fiantohana ny tsy mety mandoa vola
© 2021 Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.